Dagaallo lagu jabiyey ciidamada gumaysiga Itoobiya.
Dadwayne rayad ah oo ay ciidammada gumaysigu xidhxidheen.
Askari Itoobiyan ah oo isusoo dhiibay ciidanka Xoreynta Ogadenya(Waraysiga Askariga).
Gudoomiyaha xarunta dhexe ee jwxo N/hure Sulub Cabdi Axmed oo ka warbixiyey dagaaladii u dambeeyey iyo duqayntii cirka.
Kaaliyaha xoghayaha QM uqaabilsan gargaarka John Holmes oo booqanaya Ogadenya.
Wariyaha RX uga soo warrama dalka Ogaadeenya yaa noo soo sheegay dagaallo badan oo si wayn loogu jabiyay ciidammada gumayisdga Itoobiya. Dagaalladaasi waxay u dhaceen sidatan;
23/11/07 cutubyo ka tirsan CWXO ayaa weerarro kala duwan ciidammada gumaysiga ugu gaystay Qorile, oo ka tirsan degmada Dannood, iyo seddex tuulo oo kale oo ku yaalla nawaaxiga Qorile oo kala ah Babaase, Dirindiiraha iyo Dhurda-kariye.
Magaalada Qorile waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay. Babaase waxaa isagana lagaga dilay 4 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay. Dirindiiraha ayaa iyagana sidoo kale ciidammada cadowga lagaga dilay 4 askari, 2 kalana lagaga dhaawacay. Dhurda-kariye waxaa ciidammada gumayisga lagaga dilay 2 askari, 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
22/11/07 Atoorka, oo degmada Dhagax-madow ka tirsan, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga gubay 1 baabuur oo Uuraal ah, kaasoo isaga iyo wixii saarnaaba ay halkaas ku bas-beeleen.
21/11/07 dagaal isaguna ka dhacay Laku-qotomaley waxaa ciidammada caga-jiidka ah ee gumayisga Itoobiya lagaga dilay 4 askari, 6 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/11/07 dagaal ka dhacay Aw-riyoole, oo Dig u dhaw, waxaa ciidammada gumayisga lagaga dilay 2 askari, 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
17/11/07 dagaal ka dhacay Laan-goba, oo Cawl-ku-dhal u dhaw, waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 4 askari, 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
14/11/07 Ananu, oo degmada Awaare ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumaysiga lagaga dilay 3 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
04/11/07 Luqun-gorayaale, oo Cobolle u dhaw, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada gumayisga lagaga dilay 6 askari, 5 kalana waa lagaga dhaawacay. Ciidammada gumaysiga ee weerarkan loo gaystay ayaa ahaa kuwo waday koox shaqaale ah oo ka tirsan Sharikada Shidaalka ee Petrona, oo laga leeyahay dalka Malleesiya. Kooxdani waxay sahaminayeen meelihii ay Sharikadaasi hawlaha shidaal qodista ka billaabi lahayd. Kooxdan ayaa markii weerarkaasi wabsaday waxay ku soo noqdeen magaalada Jigjiga. Weerarkani wax dhibaato ah uma gaysanin shaqaalaha Sharikadaas.
Ciidammada nacabka ah ee gumayisga Itoobiya ayaa meelo kala duwan oo Ogaadeenya ka mid ah ku xidhxidhay dadwayne rayad ah oo aan waxba galabsanin.
25/11/07 waxay ciidammada gumaysigu Ceelka Bullaale ka soo xidheen 2 nin oo Ceelka Geel ka waraabsanayay, kuwaasoo ay ku soo xidheen magaalada Dhagaxbuur. Labadan nin midkood waxaa lagu magacaabaa Xiis Colaad Mahad, midka kalase magaciisa ma aanaan helin.
23/11/07 Jidhacle, oo Haar-cad u dhaw, waxay ciidammada gumaysigu ku xidhxidheen dadka kala ah;
1- Gaagaale Caadil
2- C/nuur C/llaahi Ibraahim
3- Maxamed Deeq Gaarane
4- Faarax Siraad Nuur
5- Riish Axmed Faarax iyo labo wiil oo ay dhashay, kuwaasoo uu midkoodna 2 sano jiro, midka kalana 2 bilood jiro.
18/11/07 Dhiita waxay ciidammada gumaysigu dhac iyo xidhay isugu dareen labo nin oo lagu kala magacaabo Dhaanshood Maxamuud iyo In C/llaahi-Dheere. Labadan nin waxay ciidammada gumaysigu ku qaateen diyaarad Helikobtar ah, ka dibna lama garanayo meel ay geeyee.
11/11/07 Haar-cad waxay ciidammada gumaysigu ku xidheen gabadh rayad ah oo lagu magacaabo Faadumo Caydiid Xasan.
08/11/07 waxay ciidammada gumaysigu ku xidheen magaalada Qabridaharre gabadh lagu magacaabo Ubax C/llaahi Xasan. Waxay sidoo kale ka dhaceen 20 Kiish oo Sonkor ah.
Radio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaa Mawjadda 41 MB ee dhererkeedu yahay 7560 KHZ,iyo internetka Radioxoriyo.com,Ogaden.com Maalmahaa Talaadada & Sabtida 7:00PM � 7:30 waqtiga Afrikada Bari